Umhla My Pet » Iyanxiba Kuba Usuku lokuqala
ukubuyekezwa: Jul. 12 2020 | 4 min ukufunda
Sicela onke amaxhoba ngendlela encamisayo iyelenqe ezukileyo: abafazi abasele ziyenziwa ukuba bakholelwa ukuba akuyazi nofifi njengoko noko ukunxiba! njani enye ucacise ukuxhaphaka nokuthandwa Baloyi nesimbo icebo zikamabonwakude? Ndiye siye kubazali bethu nesikhalo, 'Wena akuyi eshiya indlu kuloo!’ kwabasetyhini ntu ukuba fashion 'punk'd nge style cable ibonisa. Konke oku engamenywanga, kanti 24/7 icebiso kuthi okwesibini-sithandabuze enomtsalane zethu namandla ethu ukunxiba kweso siganeko zonke-ezibalulekileyo: Lokuqala Umhla. Kodwa ngaba ngokwenene ufuna ilokhwe egqibeleleyo ukuba nomgibe inkwenkwe kumnyango olandelayo?
Ndiqinisekile ukuba iimpahla musani ukwenza umfazi okanye enze loo ndoda kuwa yintloko phezu izithende ukuba ibhinqa Manolo Blahniks. Ndiye ke ukuva umntu athi 'ndathandana naye xa ndaqala yakhe ndabona ukuba Calvin Klein dress ehlotyeni . . . Usakhumbula omnye, ubusi, kunye amaqhosha ngasemva.’ Kuyabonakala ukuba ukhumbula ukuba kulayitwa ekukuboneni kwenye endala iihempe zakhe iqhosha-phantsi.
Sekunjalo, Kufuneka adibane amava lokuqala-umhla kwaye ndiye abenenane wam pawings woyika ngokusebenzisa kumagunjana yam elinde 'egqibeleleyo’ ebeliza ngaloo ngokuhlwa lokuqala ngaphandle. Ndikhe wachitha iminyaka umkhanya izibini kwi hookups lwabo lokuqala, ezidityanisiweyo kunye yam elidlulileyo fashionista, Mna ezintlomeni nabanye imithetho ingqiqo ukuze sokuqala-umhla yokuxhela impumelelo.
1. Musa anxibe abamnyama. Yinto sele mnyama ngokwaneleyo kuloo club, ivenkile okanye imovie theatre uya mhlawumbi ngumoya phezulu. Umsebenzi wakho ndahlukile, ukuba zifane nendawo ezikuyo yakho. ngaphandle, Uhlolisiso yam ongekho abafana enye bafumanisa ukuba afumane umbala lithemba ngokupheleleyo kwaye i yadika.
2. Musa ukufaka lakho gumbini. Eli asiloxesha layer shirt owuthandayo phantsi ukuba isikipa gorgeous nje nako ukuxhathisa ukusuka mall bayigubungele ngeentsontelo ngemixokelelwane, neeperile. Naloo iliso candy eninzi, mfo yakho usenokungakwazi kungona ukuba bagxininise apho. Uzama ukufumana ukhuphiswano ubuntu, hayi 'Runway Project.’
3. Musa ukubonisa phezulu kwanto ekwenza khangela ngathi bendikhe yawusongela, ijijekileyo okanye wabopha ayaxuxuzela. Oku kukhokelela kuphela engalunganga-ndlela yokucinga kuye, njenge, 'Njani ukuba angene kuloo ukufumana-up . . . yaye mna njani ukuba naye kulo?’ ngaphandle, ulahle ngothsuphe ye banoku- yobukhoboka buqu umntu kubandakanya ulwazi ngendlela kakhulu ngomhla wokuqala.
4. Ingqalelo ekhangela inkulu ngaphezu esinqeni. amathuba, uninzi ngokuhlwa uya kuba ehleli phantsi. Chitha ubuncwane inesigidimi umfanekiso omhle ukuba abone. Mnike into ukuthetha: iblawuzi kwi umbala olukhulu, a phezulu-ezenziwe kakuhle ebonisa emagxeni akho, okanye ngesafire bamajikazi bamba ukukhanya. Yena na ku ndiyazi fashion, kodwa abantu abaninzi bayazi into abayithandayo kwi imibala neemilo: ukuba umbala kuwe, imilo ihempe amagophe yakho.
5. Zamkele umbala. Awunayo ukunxiba splash Technicolor, kodwa umbala encinane ubuso bakho uya amehlo akho uncumo lwakho. Emthunzini kunene uya kwenza ukhangele zazimhambela kakuhle xa uziva ugula ukusuka ukutya okanye into ayithethayo. Amadoda umthande ebomvu – ukusuka injini umlilo cherry yetumato ukuze iqhosha sisityebi ebomvu. Uburheletyo nemfuneko Ukuntsonkotha ukuba ukhetha emthunzini efanelekileyo isandi sakho ulusu. Zibandakanye umthunzi utyikityo. Sebenzisa lubhelu izityebi ukusukuma olusondeleyo kunye zobuqu.
6. Okulungeleyo baqhathe. Musa ukuzikhathaza ubungakanani. Kugxininisa kufanelekile. Xa isinxibo siphezu kwakho umele ubalungele wena yakho sayizi wentelekelelo. kuba ngokwenene: sonke iingxowa asifuni ukuba ndithwale yaqengqelekela sinqwenela baliqengqe kude. Eyona nto ibalulekileyo kukuba nobugcisa ukuzifihla nokutyala impahla yakho. Xa isinxibo elele phantsi, Ndiya qi ni akasayi ngokujonga ubungakanani elikwibheji.
7. okokugqibela, ngomhla wokuqala akufani ezinkulu ibonisa. Injezu iimpawu okona, kodwa hayi zonke ngaxeshanye. A neckline wokuba akuyomfuneko ukuba akhuphisane sisiketi eliphezulu ethangeni. Okungaphantsi kuninzi. Encinci ubonisa ngoku, kokukhona uya kuba ngenxa kamva.
INZUZO LE UBOMI: isinxibo Diary
Umhlobo wam uHeather ugcina Polaroid imifanekiso ngaye isinxibo sakhe asithandayo. Yena ngokulula uyavuma ukuba ukhe iimpahla ngaphezu ngokokuzikhumbula, ngoko iyithobele irekhodi ukufumba fashion noko kubonakala kakuhle yakhe. Xa ebeye kuthenga yena kuthatha iifoto ezimbalwa ecaleni ngenxa inkuthazo nokumodareyithwa. Kungenzeka ukuba uthathe inyathelo yakhe ingcamango enye ngakumbi kwaye uzihlele sakho sikhangeleka ozithandayo. Qaphela leyo ndlebe uyithandayo isuti, bhala phantsi apho isinxibo ikwenza ukuba uzive ngathi kwesigidi ezixhonti wabeka kunye ingqokelela iphupha weentlobo komhla wokuqala.
Nazi ezinye izikhokelo isimbo xa akuyi uqinisekile zefashoni eyakho kwezobugcisa. ngokunjalo, ungafumana amacebiso Haute angaphezulu www.thelastsinglegirlintheworld.com.
Thenga kufana pro ngoonobumba fashion yehlabathi kunye Apho Wear 2005 khokeli izixeko ezahlukahlukeneyo: Las Vegas, City New York, Paris, ElamaTaliyane (Florence, eRoma, Milan), San Francisco, ELos Angeles London
Television wasekhaya: ukubukela kugqalwe kwiziqendu ezimbalwa Into ukuba Wear. Yinto kuhlekwe kwaye wena ungenza kukuthuthuzela ngokuthi 'Bendiya inganxitywa!’ Nokuba yaseBritani okanye uguqulelo American uya kukunika isibindi kuhlasela egumbini lakho uze ndicingisise isimbo yakho.
13 Iingcamango zoMhla woBusika ngamava angalibalekiyo